Malunga nathi -Yunis International Trading Co., Ltd.
Yunis International Trade (HK) Co., Ltd. yasekwa ngo-2011. Yinkampani kunye namalungelo ukungenisa kunye nokuthunyelwa kumazwe angaphandle nguRhulumente State of Trade Foreign and Cooperation Uqoqosho kunye noLawulo Jikelele Customs. Inkampani inesiseko esomeleleyo soqoqosho, uthungelwano olomeleleyo lobudlelwane, kunye nabasebenzi abagqibeleleyo. Ngokungena kwe China kwi-WTO, urhwebo lokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle luyakhula. Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabarhwebi nabangenisa elizweni kunye nabarhwebi abathumela kwelinye ilizwe, inkampani yethu yenze inkonzo yokungena indlu ngendlu kubathengi kwihlabathi liphela. Sinenkqubo yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle ngokupheleleyo kwilizwekazi lase China Senze ubudlelwane obusondeleyo beenkampani ezininzi kunye neenkampani zeenqwelo moya.
Sinokubonelela ngezona ndlela zokuhambisa kunye nezothutho lomoya ngeempahla zakho ezithunyelwa kumazwe angaphandle, kunye nokuvunyelwa kwamasiko kunye nokuthengwa. I-inshurensi kunye nezinye iinkonzo, kwangaxeshanye, inkampani yethu inendawo yokugcina izinto efanelekileyo e-Yiwu ukuhlangabezana neemfuno zempahla yakho kwi-Yiwu transit, ungajonga umthombo wempahla, ukudityaniswa kwemithwalo eninzi, ukhethe indlela efanelekileyo yokuhambisa, ukuhanjiswa okukhuselekileyo nokukhawulezayo Ukufikelela kwiimpahla.
Ukwenza Urhwebo ngokulula
Sinoluhlu olubanzi lothungelwano lolwazi lwempahla kunye namaqabane kwihlabathi liphela. Ngaphantsi kwesikhokelo sefilosofi yeshishini "yokwenza urhwebo lube lula", siphumelele iziphumo ezintle ngemizamo engagungqiyo yabo bonke abasebenzi. Inkampani yethu ineqela lomqolo elineshishini elinobuchule kunye namandla okwenza imisebenzi. Ngelixa ukubonelela abathengi ngezisombululo ezahlukeneyo zamalungiselelo, banokuvula imarike yaseTshayina yabathengi baphesheya ukuba bafumane umthombo wempahla, bajonge iimpahla, kwaye babhengeze lonke ixhala lokungenisa nokuthumela ngaphandle. Ukubonelela ngobungcali, ubuqu, imozulu yonke, iinkonzo ezijikelezayo.